Football Khabar » गोल्डेन बुट दौड : अन्तिम खेलमा एमबाप्पेलाई चमत्कारको आश !
गोल्डेन बुट दौड : अन्तिम खेलमा एमबाप्पेलाई चमत्कारको आश !
स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेलमा २ गोल गरेसँगै बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी युरोपियन गोल्डेन बुट नजिक पुगेका छन् । गत राति एइबारविरुद्ध २ गोल गरेसँगै यो सिजन मेस्सीले ला लिगामा कूल ३६ गोल पूरा गरेका छन् ।
जारी सिजन युरोपका टप–५ लिगमा मेस्सी ला लिगाबाट सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् । उनी अब गाल्डेन बुट दौडमा स्पष्ट ४ गोलको अग्रतासहित पहिलो नम्बरमा छन् ।
उनीपछि फ्रेन्च लिग वान क्लब पिएसजीका केलियन एमबाप्पे छन् । उनले हालसम्म कूल ३२ गोल गरेका छन् । एमबाप्पे अब मेस्सीभन्दा ४ गोलले पछि छन् । गत राति मेस्सीले २ गोल गरेपछि एमबाप्पे ४ गोलले पछि परेका हुन् ।
तर, एमबाप्पेले अब लिग वानमा अन्तिम एक खेल खेल्न बाँकी छ । पिएसजीले सिजनको अन्तिम खेल ४ दिनपछि स्टेड रेइम्ससँग खेल्दैछ । सो खेलमा एमबाप्पे मैदान उत्रिनेछन् ।
अब मेस्सीलाई गोल्डेन बुटमा पछि पार्न २० वर्षीय एमबाप्पेले अन्तिम खेलमा चमत्कारिक ढंगले गोल गर्नुपर्छ । मेस्सीको गोल संख्यासँग बराबरी गर्न उनले अन्तिम खेलमा कम्तीमा ४ गोल गर्नुपर्छ भने उछिन्न ५ गोल गर्नुपर्छ ।
यदि एमबाप्पेले सो खेलमा ४ गोल गरे भने उनले मेस्सीको ३६ गोलसँग बराबरी गर्दै गोल्डेन बुट बाँड्नेछन् । यदि उनले चमत्कारिक ढंगले ५ गोल गरे भने उनले मेस्सीलाई पछि पार्दै गोल्डेन पनि खोस्नेछन् ।
एमबाप्पेले २ दिनअघि डिजोनविरुद्धको खेलमा २ गोल गरेका थिए । त्यसअघि उनी ३ खेलमा प्रतिबन्धमा परेका थिए ।
प्रकाशित मिति ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०७:०५